Ngwugwu ngwugwu: Nyochaa akụkọ ihe mere eme nke ngwa ndị arụnyere | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụrụ na anyị nwere ngwaọrụ mkpanaka nwere sistemụ arụmọrụ Android n'aka anyị, mgbe ahụ n'ezie anyị ga-etinye ọtụtụ ọnụ ọgụgụ nke ngwa site na Storelọ Ahịa Play, nke n'ọtụtụ ọnọdụ nwere ike ịbụ n'efu na ndị ọzọ kama nwalee ha maka oge a kapịrị ọnụ; a ga-enwe oge nke ebe nchekwa dị n'ime ọnụ ahụ na-ejupụta, ebe ọ dị mkpa iji gbalịa iwepụ ngwa ndị ahụ niile anyị na-enweghị mmasị ịnwe n'oge ahụ.
Ka oge na-aga, ọ ga-adị anyị mkpa ịrụ ụdị ọrụ n'ime ọnụ ya, na-eji ngwa gam akporo ọ bụla nke anyị nwere ike itinye ma ọ bụ wepụ ya na oge ọzọ. Nke ahụ bụ mgbe ngwa ọrụ a na - akpọ "ngwugwu ngwugwu" bidoro ịrụ ọrụ, ebe ọ bụ na, ọ ga-egosi anyị akụkọ ihe mere eme niile nke ngwa ndị anyị etinyela na ọnụ, nke ga - enyere anyị aka icheta aha onye ọ bụla n’ime ha ịchọ ya ọzọ na ụlọ ahịa Google.
Baa Uru na ojiji nke «ngwugwu Tracker»
Ga-aga na njikọta ahụ «Ngwugwu ngwugwu»Na Storelọ Ahịa Play ka ị wee wụnye ngwá ọrụ a na ọnụ. Ozugbo i mechara ya wee gaa n’ihu igbu ya, ị ga - ahụ interface ebe ị ga - eme ya kọwaa oge oge nke mere na nchọta maka ngwa gam akporo niile etinyere ma ọ bụ wepụ ya na-egosi na obere akụkọ ihe mere eme. Site n'ebe ahụ naanị anyị ga-ahụ ndị nwere akara ngosi akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbara ọbara, nke na-anọchite anya ma ọ bụrụ na ọ dị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị ewepụla ya na njedebe.
The bara uru applicability maka ngwá ọrụ a na-ama kwuru n'elu, ọ bụ ezie na anyị nwekwara ike na-agbalị iji "ngwugwu Tracker" na- mara ụdị ngwa onye dị iche arụnyere, ọ bụrụ na ọnụahịa ahụ adịghị n'aka anyị n'ihi mgbazinye ego nye mmadụ n'oge ụfọdụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Ngwugwu ngwugwu: Lelee akụkọ ihe mere eme nke ngwa gam akporo arụnyere na ọnụ ya
Etu esi egbutu kaadi SIM iji mee ya micro-SIM